MMEMME MAKA ỊGỤ DJVU - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Akwụkwọ eletrik aghọwo onye kwesịrị ekwesị na akwụkwọ ndị a na-ebipụta akwụkwọ: ọ dị mfe ịchọta ha site na Ịntanetị, ha na-enwe ike ịnwetanwu, mgbe mgbe ha nwere onwe ha ma ọ bụ dị ọnụ ala karịa akwụkwọ ha analog. Otu n'ime usoro ndị a na - edepụta na kọmputa - djvu - ọ dị mwute ikwu na, ọ bụ ihe arụmọrụ nke arụmọrụ na - enweghị ike ịmatakwu ya, ya mere a chọrọ usoro pụrụ iche iji lee faịlụ na usoro djvu. Ka anyị gbalịa ịchọpụta ọdịiche dị iche na uru nke ndị kasị ewu ewu.
STDU Viewer bụ usoro ihe niile maka ịlele akwụkwọ eletrik, gụnyere ikwe ka ị rụọ ọrụ na faịlụ na usoro djvu. Na STDU Viewer, a ghaghị ịkwụ ụgwọ maka ndị ọ dịkarịa ala na-emeghe ọ bụghị naanị djvu akwụkwọ na kọmputa, kamakwa faịlụ na pdf, tiff, fb2, pdb, cbr, cbz, epub na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na mmemme a anaghị arụ ọrụ na ndekota, ọ na-enye gị ohere ịlele ha n'ụdị dị mma, mbupụ otu peeji nke ma ọ bụ akwụkwọ dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ ederede, gbanwee ọkụ, ọdịiche na agba nke akwụkwọ ahụ, yana idepụta faịlụ ahụ.
Ihe ọzọ doro anya na STDU Viewer bụ ikike ibudata mbipute a na-ebigharị - echichi nke usoro ihe omume ahụ adịghị mkpa, ị nwere ike imeghe djvu-faịlụ, mgbe ị na-echekwa folda ahụ na obere ngwa-ngwa na ngwa kọmputa, jiri ya na kọmputa ọ bụla.
Ihe omume WinDjView, n'adịghị ka Stdu Viewer, dị elu nke ọma ma "eme ka ọ dị elu" naanị maka ịlele djvu-faịlụ. Okwesiri iburu n'uche na ya na-eji aka ya eme ihe n'ezoghi oke: a na-ahuta ya site na ngwa ngwa, ngbanwe di mfe site na ibe edokorita nke akwukwo a na-ele anya, otutu akwukwo nziputa akwukwo, nhọrọ ndi ozo na nbia nke nbudata di elu.
Download Free WinDjView
Ọrụ nke usoro DjvuReader dị iche na nke atụmatụ nke WinDjView usoro. Dị ka ndị mmepe ahụ si kwuo, ihe kachasị mma nke DjvuReader bụ ọkwa ya na obere nha, ya mere, usoro a maka ikiri faịlụ djvu nwere ike ịgba ọsọ na kọmputa ọbụlagodi na ị nweghị ikike nchịkwa na ya.
Ihe omumu: Otu esi emeghe djvu na DjvuReader
ACDSee bụ usoro ọzọ maka imeghe djvu faịlụ, nke a na-ebughị maka nzube a, kama ọ ga-adịrị mfe ịnagide ọrụ a. Ihe nchịkọta isi nke usoro ihe omume ahụ bụ ohere nke eji ya n'efu maka oge dị mkpirikpi (ụbọchị 30) na enweghị ike imeghe multipage na ụfọdụ agba agba agba.
Dịka ị nwere ike ịhụ site na nyochaa n'elu, ọ ka mma iji mmemme a haziri iche maka ịlele nsonaazụ djvu - ha na-arụ ọrụ ma dị mfe iji, nakwa n'efu.